← राष्ट्रपतिबाहेक कसैले हटाउन पाउँदैन कटवाललाइ
भारतिय विदेश सचिव मेनन के सन्देश वोकेर आए नेपाल ? →
स्थलगत अनुगमनमा के देखेछ अध्ययन टोलिले ? प्रतिवेदनको पुर्ण पाठ
• भौवानाकादेखि ८-१० किलोमिटर दक्षिण चिलरियामोड भन्ने ठाउँमा पुरानो पिलर जस्तो देखिने स्तम्भ रहेको र त्यही स्तम्भ ’round रनियापुर भन्ने ठाउँमा पुस्तौदेखि दाङ, बिजौरी गाउँ विकास समितिबाट गएका थारुहरुको बस्ती रहेको र ती थारुहरुसंग नेपालको नागरिकता र प्रमाणपत्र रहेको साथै दक्षिणतिरका भारतीय नागरिकले समेत उक्त गाउँ नै नेपालको सीमा भएको भन्ने धारणा पाइएकोले उक्त गाउँसम्म नै नेपाल सीमाना हो भनी अनुमान गर्न सकिन्छ।
पुराना तथ्यहरुको अध्ययन गर्दै जादा नेपाल सीमाना हाल नेपालीहरुले भोगचलन गर्दै आएको सीमाना भन्दा झण्डै ८-१० किलोमिटर दक्षिण हुन सक्ने अनुमान हाम्रो अध्ययनले निकालेको छ। सीमा क्षेत्रमा बसेका नेपालीहरुलाई आजसम्म जनजिविकाका आधारभूत आवश्यकता पुर्‍याउन सकिएको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सञ्चार, सडक, खानेपानीको समस्या कहालीलाग्दो छ। सरकार र सरकारी कार्यालय समेत कहाँ र कस्ता छन् तिनले के के गर्दछन् नाकाबासीलाई यस’bout केही थाहा छैन। सरकारी कार्यालय समेत आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई शहर बजार र सीमित उच्चवर्गमा केन्द्रीत गरिरहेको छ। यस हिसावले मुलुक परिवर्तनको वर्तमान अवस्थामा हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छौं।
One response to “स्थलगत अनुगमनमा के देखेछ अध्ययन टोलिले ? प्रतिवेदनको पुर्ण पाठ”
जुन 19, 2009 at 8:11 बेलुका
यो प्रतिवेदन वनाउने मात्रै हो yeslai कार्यान्वयन पनि गरेर देखाउन पर्यो ani matra hun chha.